Ny Ford Motor Company dia manome voninahitra an'i BorgWarner amin'ny loka iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny Ford Motor Company dia manome voninahitra an'i BorgWarner amin'ny loka iraisam-pirenena
BorgWarner, mpitarika ny vokatra manerantany izay manome vahaolana maharitra sy maharitra ho an'ny tsenan'ny fiara, dia nekena ho mpamatsy vola be indrindra amin'ny mari-pankasitrahana faha-23 amin'ny Ford World Excellence Awards. BorgWarner dia nambara fa mpandresy Create Must-Have Products androany tamin'ny hetsika virtoaly Ford Motor Company.
BorgWarner, mpitarika ny vokatra manerantany izay manome vahaolana maharitra sy maharitra ho an'ny tsenan'ny fiara, dia nekena ho mpamatsy vola be indrindra eo amin'ny 23rd Fanomezana mari-pankasitrahana eran-tany an'ny Ford World Exclusive. BorgWarner dia nambara fa mpandresy Create Must-Have Products androany tamin'ny hetsika virtoaly Ford Motor Company.
"Voninahitra ho anay ny mandray an'ity World Excellence Award ity ho an'ny Battery Electric Vehicle Integrated Drive Module avy amin'ny Ford efa ela," hoy i Frédéric Lissalde, filoha sady CEO, BorgWarner Inc.. mametraka ny haitao madio sy mahomby ho avo lenta ary mahafeno ny filan'ny fivezivezena ankehitriny sy ho avy.
"Ny mari-pankasitrahana eran-tany an'ny Ford Motor Company dia manome fankasitrahana ireo mpamatsy vola be indrindra eran'izao tontolo izao noho izy ireo nanampy tamin'ny fanatanterahana ny drafitra Ford +," hoy i Hau Thai-Tang, lehiben'ny sehatry ny vokatra ary tompon'andraikitra amin'ny asa. “Ireo mpamatsy toa an'i BorgWarner dia lakilen'ny fahombiazan'ny Ford hatrany rehefa mampiasa ny tanjaky ny fototra izahay mba hananana fahaiza-manao vaovao sy hanatsara ny zavatra iainan'ny mpanjifa.”
Ekena ireo nahazo voninahitra noho izy nahatratra ny ambaratonga avo indrindra amin'ny hatsarana manerantany amin'ny sokajy ao anatin'izany:
Mari-pankasitrahana andry voalohany - Mitondra ny mpanjifa toy ny fianakaviana, mihodina amin'ny fiara fitaterana ary mifaninana toy ny mpihaika, mamorona vokatra tsy maintsy ananana
Fanomezana fahasamihafana sy fampidirana ho an'ireo mpamatsy izay mahay indrindra amin'ny fampidirana ny fahasamihafana ao anatin'ny fandaminana sy ny fizotran'ny orinasa
Loka maharitra ho an'ireo mpamatsy izay manatsara ny tontolon'ny orinasa
Ny mari-pahaizana kalitao volamena sy volafotsy ho an'ny tranokala mpanamboatra izay mampiseho kalitao ambony, fandefasana ary fahombiazan'ny vidiny mandritra ny taona